Wasiiradda arrimaha dibadda oo wal wel ka muujisay haddii Mareykanku safaarad ka furto Qudus | Somaliska
Wasiiradda arrimaha dibadda oo wal wel ka muujisay haddii Mareykanku safaarad ka furto Qudus
Wasiiradda arrimaha dibadda dalkaan Iswiidhan u qaabilsan ee Margot Wallström, ayaa walaac ka muujisay saafaradda Mareykanku qorsheeynayo inuu ka farto magaaladda barakeeysan ee Qudus ee dhulka Falastiiniyiinta ee Yahuuda xoogga ku heeysato.
Wasiiradda ayaa sheegtay in Quds oo loo aqoonsado magaalo madaxda Israa’iil ay ka dhigan tahay musiibo, islamarkaasina abuuri doonto jawi deganaan la’aan ah, iyadoo halkaasi ay aheyd mid xaaladdeedu kacsaneyd. Ugu dambeyntiina wasiirada ayaa ku baaqday in xal labada dhinac ah la raadiyo.
Hadalka wasiiradda ayaa imanaya xilli maalmo ka hor uu gollaha ammaanka ku gacan seeray hadalkii madaxweyne Trump-ka Mareykanka ku sheegay in Quds ay tahay magaalo madaxda Israa’iil islamarkaasina safaaradda dalkiisa u rarayo halkaasi, waxaana hadalkani abuuray carro xoogan oo ay dunida muslinka ka muujisay.
Waa maxay isbuuca Almedalen?
Ciyaarahan Zlatan Ibrahimovic oo ka cawday habka ay saxaafada Iswiidhan ula dhaqanto
Hogaamiyaha xisbiga Social Demokraterna oo is casilay